Published Saturday, September 4, 2010 by မောင်သာဂိ in NS, photos, thoughts
Blog မှာ post မတင်ဖြစ်တာတောင် အတော်ကြီး ကြာသွားပြီ။ ကျောင်းပြီးသွားတော့ ဟိုနားယောင်လိုက် ဒီနားယောင်လိုက်နဲ့ အလေလိုက်နေမိတာလည်း ကြာပြီ။ သူများတွေလည်း ကျောင်းစတက်တဲ့ လူတွေလည်းတက် အလုပ်ရတဲ့လူတွေလည်း ရပြီးအလုပ်တွေလုပ်လို့။
ကျနော်ကတော့ NS ဝင်ရမှာဆိုပြီးတော့ ဘာဆိုဘာမှ မလုပ်ပဲ နေနေလိုက်တာ နောက် ဒုတိယမြောက် တနင်္လာနေ့ September 13ဆို NS ထဲဝင်ရတော့မယ်။ တနင်္လာနေ့မနက် အစောကြီး Pasir Ris ကနေ မော်တော်ဘုတ်လေးစီးပြီးတော့ Pulau Tekong ဆိုတဲ့ကျွန်းကိုသွားပြီးတော့ စရတော့မယ်။
ဒီကြားထဲမှာ Blog မှာ မတင်ဖြစ်ပေမဲ့ Flickr မှာတော့ ဓာတ်ပုံတွေ တင်ဖြစ်တယ်။ သွားကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ Link မှာသွားကြည့်လို့ရတယ်။
ဒီနှစ် SP Myanmar Cultrual Show ကိုလည်း ဓာတ်ပုံရိုက်ဖြစ်သေးတယ်။ အခုလောလောဆယ်တော့ ဓာတ်ပုံတွေကို Facebook မှာပဲတင်ရသေးတယ်၊ ကြည့်ချင်ရင် ဒီ Link ကနေသွားကြည့်လို့ရတယ်။ ရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံအားလုံးရဲ့ တစ်ဝက်လောက်ပဲတင်ရသေးတယ်။ ကျန်တာတွေကိုတော့ NS ထဲမသွားခင်မှာ အပြီးလုပ်မယ်လို့ လျာထားတယ်၊ ပြီးမပြီးကတော့ စောင့်ကြည့်ရတော့မှာပေါ့။
မြန်မာပြည်ကို ခဏပြန်သွားတုန်းက အင်းလေးမှာ ရိုက်လာတဲ့ အပေါ်ကပုံလေးကို ကိုယ့်ဟာကိုယ် Wallpaper လုပ်ကြည့်ရင်းနဲ့ သဘောကျတာနဲ့ အကုန်လုံးနဲ့ ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ မျှဝေလိုက်တယ်။ ဒီ Link မှာ သွားပြီးတော့ Download လုပ်လို့ရတယ်။
Resolutions တွေကတော့ Desktop နဲ့ Laptop တွေအတွက် 1080p Full HD ကနေပြီးတော့ 1024x576 အထိပါတယ်၊ ပြီးတော့ iPhone4 အတွက် သက်သက် 640x960 resolutionပါ ပါသေးတယ်။
Published Tuesday, May 4, 2010 by မောင်သာဂိ in Droplets, photo
Taken awhile back in august 2009. UsingaSB-800 flash borrowed fromafriend.
Camera Nikon - D90
Lens - Nikkor 18-105
Exposure - 1/200 sec
Flash- SB800 fired from left of the camera.
Increased Contrast and Cropped in Aperture.
Framed in Photoshop.
Hit Read More for Metadata
Published Tuesday, March 23, 2010 by မောင်သာဂိ in photos
Taken with the reverse mounted 50mm. with f/16,6sec exposure.
Published Thursday, March 18, 2010 by မောင်သာဂိ in photos, testing
Testing my newest baby, Tokina 11-16mm f/2.8. UWA Rock!
Published Monday, February 22, 2010 by မောင်သာဂိ in photos, sunset
Photography is the soul of my life
SP mm Friends
Based on Black Minimalism theme by Valter Nepomuceno |
| Modified By မောင်သာဂိ.